Motorola Moto Otu: Nkọwapụta, Ahịa na Ntọhapụ | Gam akporosis
Motorola Moto One: Ahịa mbụ gam akporo
Anyị anọwo na ya ọtụtụ leaks banyere Motorola Moto One, ekwentị mbụ nke ụlọ ọrụ iji gam akporo One dị ka sistemụ arụmọrụ. N’ikpeazụ, n’ụbọchị mmeghe a nke IFA 2018, e gosipụtara ngwaọrụ ya n’ihu ọha. Akọwapụtawo nkọwa ya na nhazi ya, ma ugbu a bụ oge iji chọpụta ma ha ziri ezi.
E gosipụtara Motorola Moto One dị ka ekwentị dị n'etiti. Anyị nwere ike were ya dị ka onye na-asọmpi nke ekwentị dịka Xiaomi Mi A2 na A2 Lite. Yabụ ị nwere ụfọdụ ndị asọmpi siri ike n'ahịa. Mana Motorola bụ ụlọ ọrụ na-amasị ndị ahịa.
Ya mere, anyị na-eche ihu ekwentị nke na-emezu ebumnuche ya, jiri atụmatụ dị ugbu a karịa karịa nkọwa a nabatara. Olee otú ọ leaked ekwentị opts maka ihuenyo na notch, na-eme ka o doo anya na ọ na-abịa ịnọ n'ahịa.
1 Nkọwa Motorola Moto Otu
Nkọwa Motorola Moto Otu
Ihe ijuanya banyere Motorola Moto One a bụ nke ahụ ahọrọla imepụta ihe nwere otu iko. Ebe ọ bụ na nke a na-abụkarị ihe e debere maka njedebe dị elu. Mana ụlọ ọrụ ahụ chọrọ nhazi dị mma, ihe gosipụtara na ekwentị a. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Ihuenyo: LTPS IPS 5,9 sentimita asatọ na mkpebi HD + (1520 x 720 sentimita asatọ) na 19: 9 ruru
Nhazi: Qualcomm Snapdragon 625
Nchekwa ime: 64 GB (Gbasaa na microSD)
Rear igwefoto: 13 + 2 MP nwere oghere f / 2.0, Ikanam Flash na 4k vidiyo @ 30fps
Igwefoto n'ihu: 8 MP nwere oghere f / 2.2 na ọkụ ọkụ
Batrị: 3.000 mAh + Turbopower
Usoro njikwa: Gam akporo 8.1 Oreo One Edition
Akụkụ: 150 x 72 x 7.97 mm
Ibu ibu: 162 g
Njikọ: Bluetooth 4.2, WiFi 802.11n, GPS / GLONASS / Galileo, Typedị USB-C
ndị ọzọ: NFC, P2i eguzogide, mkpisiaka ihe mmetụta, RadioFM
Anyị nwere ike ịhụ na akụkụ buru ibu nke ụdịdị a maka agbapụburu. Motorola ahọrọla ọkwa ahụ, dị ka ọtụtụ ụdị ndị ọzọ, dị ka ụzọ isi bulie nha ihu igwe. Ihe kachasị ịtụnanya ma ọ bụ na-akụda mmụọ bụ nhọrọ nke ihe nhazi ngwaọrụ.
Snapdragon 625 bụ ezigbo nhazi, nke na-arụ ọrụ nke ọma, mana ọ dịla n'ahịa ruo oge ụfọdụ. Ọbụna Qualcomm n'onwe ya na-ewebata nhọrọ ọhụrụ n'ime oke a, nke nwere ike inye ọrụ ka mma. N'ihi ya, ọ bụ obere "mana" a ga - etinye ya na Motorola Moto One a. Ọ bụ ezie na ọ gaghị emetụta arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ nke ukwuu.
Akụkụ ọzọ nke ga-ewepụta echiche na ngwaọrụ bụ batrị. Ọ bụ ihe ijuanya na ike ya bụ 3.000 mAh, nke dị ụkọ maka ọtụtụ. Agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ na-ekwe nkwa nnwere onwe zuru oke iji nwee ike iji ekwentị ụbọchị niile. Ọ na-abịa na ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa ekele maka teknụzụ Turbopower, ekele nke ọ ga-ekwe omume ịnweta awa isii nke nnwere onwe na nkeji iri abụọ.
Eziokwu ahụ bụ na Motorola Moto One na-eji gam akporo Otu dị ka sistemụ arụmọrụ pụtara na ga-abụ otu n'ime ekwentị izizi iji nweta mmelite gam akporo 9.0 achịcha n'oge ọ na-oru. Na mgbakwunye na ịnweta mmelite nche ugboro ugboro. Na nke a, ha ga-abụ kwa ọnwa patches maka ọrụ. N'oge a amaghị ya mgbe mmelite a ga-abata na ekwentị.
N'okwu a, anyị na-eche otu ụdị nke Motorola ekwentị mbụ a na gam akporo Otu. A mbipute nke nwere 4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa dị n'ime. Naanị otu agba ekwuru na ihe nlereanya a ga-adị, nke ị nwere ike ịhụ na onyonyo ahụ, bụ oji. Ọ bụ ezie na a na-atụ anya na a ga-enwekwu agba, ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe ekwenyela.
Enweghi ụbọchị akọwapụtara maka mbido ya. Ekwuru na Motorola Moto One rutere mba ndị dị na Europe, Latin America na Asia na ọnwa ndị na-abịa. Yabụ na-atụ anya na ọdịda / udu mmiri a ga-adị ugbu a. Ọ ga-eme ya na ọnụahịa nke euro 299, nke na-adịghị njọ na-atụle ya ụdịdị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola Moto One: Ahịa mbụ gam akporo
Casio Pro Trek WSD-F30: Smartwatch maka ihe omimi
Na-asọpụrụ Ime Anwansi 2: A na-eme ka njedebe nke Honor dị ọhụrụ